Naga soo wac: +8613832728087
Mid toosan iyo mid toosan
Khadka Wax -Soo -Saarka Kaarboorka
SQDJ-2500/2800 Qaabeynta mashiinka sanduuqa ciddiyaha laba-xabbadood oo otomaatig ah
A. Waaxda quudinta waraaqaha: 1. Mootada ugu weyni waxay qaadataa xeerka xawaaraha beddelidda soo noqnoqoshada, nidaamku waa sanqadh la'aan, xeerka xawaarahana waa mid dabacsan oo deggan. 2. Habka quudinta warqadda laba-servo ayaa la qaatay si is-hagaajintu u noqoto mid deggan, hufan oo sax ah. 3. Qaybta quudinta warqadda hore ...
Madaxa madbacadda ayaa maanka ku haysa: waxa sababay taayirada duubista caagga iyo talooyinka dayactirka
Talooyinka dayactirka Si loo dheereeyo cimriga adeegga duubista khadadka, khubarada tiknoolajiyadda daabacaadda waxay soo jeedinayaan in hawlgalka dhabta ah, fadlan maskaxda ku hay waxyaabahan soo socda: toddobaad walba la hubiyaa ....
Xargaha roogga ee madbacadda (oo ay ku jiraan rollers -ka biyaha iyo rollers -ka khad) ayaa kaalin muhiim ah ka qaata geeddi -socodka daabacaadda, laakiin wax -soo -saarka dhabta ah, shirkado badan oo wax -daabaca ayaa beddeli doona rollers -kii caagga asalka ahaa isla marka la isticmaalo. Inta badan soosaarayaasha waxay leeyihiin nadiifin aan ku filnayn iyo ...
Hebei Xinguang kartoonka Warshadaha Makiinadaha Co., Ltd.
ZJ-V5B Haydarooliga dhagax-riix-riix-riix-riix-riix-riix-dhismeed feature ★ qaadasho wadidda haydarooliga si uu u dhammaystiro xajinta warqadda, dabciyo, ka-qaadka dhexdhexaadka, tarjumaadda bidix iyo midig iyo kuwa kale ， qaadista warqaddu waxay qaadataa wadista haadka. Ke Biriiga la hagaajin karo wuxuu qaataa nidaamka bareega ee bar -tilmaameedka badan. ★ mar walba ...
Iyada oo mashiinka daabacaaddu uu ka kooban yahay geedi socodkii ugu dambeeyay ee xariijinta wax soo saarka sanduuqa kartoonka, daabacaadda 、 dabagalka 、 laabidda 、 dhejiska iyo tirinta baakadaha waa la dhammeyn karaa, aad bay u fududeeyeen hababka wax soo saarka sanduuqa kartoonka. Mashiinka oo dhan qaybaha korontada ayaa doorta caalamiga ah ...
DHIBAATOOYINKA IYO DHIBAATOOYINKA QADKA SOO SAARKA GUDDIGA WAREEGAY （2）
Saddex, warpage 1. Warpage-ku wuxuu u qaybsan yahay: warping downward downward, horizontal upping warping, longitudinal upper warping, longitudinal downping warping, S-shaped warping, two-way warping 2. Khataraha ay sababaan warping: ① Ka dib mashiinka looxaanta jiingad ah jar, warqaddu ma noqon karto mid otomaatig ah ...
DHIBAATOOYINKA IYO DHIBAATOOYINKA KHADKA SOO SAARKA GUDDIGA
1. Adhesion liidata (xabagta furan, xabagta been abuurka ah) Waxqabadku waa: ka dib markii dhegaysigii hore ee kartoonku uu socday muddo 5 daqiiqo ah, iyada oo la adeegsanayo xoog dibadda ah, gudaha, dusha ama A, B dusiyeyaasha ama sanduuqa , iyo dhammaan fiilooyinkii waraaqaha ahaa waa dhawrsan yihiin, lama qaawiyey, oo ...
Guul -darrooyinka caadiga ah iyo tallaabooyinka ka -hortagga xarigga wax -soo -saarka jiingadda
Aqoonta la xiriirta warshadaha ee mashiinnada baakadaha kartoonka
Waraaqdu waxay inta badan ka samaysan tahay alwaax, saxarka baasaboorka, iyo cawska oo ay ku jiraan maaddooyin fiber kala duwan ah. Dhumucda warqadda ee ay soo saarto warshada waraaqaha, ama lagu dhex dhisay warqad iyo kartoon. Laakiin khadka ma aha mid adag. Guud ahaan marka la hadlayo, miisaanka aasaasiga ahi wuxuu ka yar yahay 200 g/m ama ka yar 0.1 mm qaro weyn. Col ...
mashiinka qaadashada sanduuqa jiingado/Mashiinka wejiga keli ah
Mashiinka hal dhinac ka kooban wuxuu ka kooban yahay duub duuban iyo mashiinka sameynta jiingada oo dhinac ah. Marka hore, waraaqda udub -dhexaadka ah waa la kululeeyaa, ka dibna duubka jiingadda ayaa loo adeegsadaa si loo sameeyo qaabka jiingadda loo baahan yahay. Ugu dambayntii, xabagtii (dhejiskii istaarijka) ayaa lagu dabaqayaa jiingadda ugu sarreysa iyo combi ...
Kiis guul leh
Sannado badan, sababta oo ah tayada sare ee alaabada shirkadayda, Macaamiil badan ayaa doortay badeecadeena, Waxaa ka mid ah macaamiil ka yimid Turkmenistan, Waxay iibsadeen 1800 nooc saddex xarig wax soo saar baakad jiingado ah, Waxay shaqeyneysay muddo saddex sano ah, Feedba Macmiil. ..
Hayso koox iib ah oo xoog leh ka dib, khaladka qalabka muddada-dheer iyo dayactirka dalka oo dhan
[Faahfaahin Kooban] Hebei Xinguang Kaartoonka Warshadaha Makiinadaha Co., Ltd. wuxuu ku yaal koonfurta caasimadda Beijing iyo waqooyiga Jinan. Waxay leedahay biyo iyo gaadiid dhulka aad ugu habboon. Waa shirkad xirfad leh oo leh baaxad aad u badan oo soosaarka mashiinnada kartoonka iyo pr ...
Farsamada | Tirakoobka halbeegga luminta kartoonka iyo tallaabooyinka hagaajinta.
Luminta shirkadaha kartoonka ayaa ah qodobka ugu weyn ee saameeya qiimaha. Haddii luminta la xakameeyo, waxay kor u qaadi kartaa hufnaanta meheradda si aad u weyn waxayna hagaajin kartaa tartanka badeecadaha. Aan falanqeynno khasaaraha kala duwan ee ka jira warshadda kartoonka. Si fudud loo dhigo, t ...
Fiiri sababta ay dhererka baakaddu isu bedbeddesho.
Markay timaaddo la'aanta kartoonnada jiingadda ah, dad badan ayaa ka fikiri doona kartoon jiingad ah. Dhab ahaantii, ifafaalahan la mid ma aha mid rogay. Waxaa lagu talinayaa in laga baaro dhinacyo dhowr ah sida alaabta ceyriinka ah, mashiinnada dhoobada ah oo keli ah, duullimaadyada, mashiinnada dhejiska, suumanka xamuulka, p ...
3km koonfur ka xigta magaalada dongguang ee bariga 104 waddo -weyne qaran